Uhambo oluya eVladivostok | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Yini ongayibona, Rusia
Vladivostok Kuyidolobha laseRussia eliseduze kakhulu nomngcele weChina neNyakatho Korea. Kuyindlela ye- idolobha eliyitheku etholakala ngaphezu kwamakhilomitha angama-9300 ukusuka eMoscow futhi iyichweba elibaluleke kakhulu laseRussia ogwini lwasePacific. Ngakho-ke, kuyindawo ebalulekile yokuhweba ngolwandle.
Isikhathi sokuqala lapho ngizwa khona ngeVladivostok ngangisesikoleni, ekilasini leJografi, lapho sizwa ngomgwaqo wesitimela waseTrans-Siberia. Ebhodini, uprofesa wadweba umugqa namadolobha amabili: iMoscow neVladivostok namakhilomitha angunaphakade axhumanisa lawa amabili. Kusukela lapho wangibuza injani iVladivostok, yini engenziwa kuyo, inikezani ...
2 Ukuvakasha kweVladivostok
Njengoba sishilo kuyinto Idolobha eliyitheku laseRussia oLwandlekazi iPacific, eduze kakhulu nomngcele neNyakatho Korea neChina. Kusukela ekupheleni kweminyaka yama-50 kuze kube ukuwa kombuso weSoviet, idolobha lavalwa kubo bonke abantu bakwamanye amazwe kwazise lapha kwakuyindlunkulu yeSoviet Pacific Fleet.
Ukukhuluma ngokwendawo eVladivostok kunezwekazi nengxenye yesiqhingi lawo aseGulf of Peter the Great. Ingxenye yedolobha isenhlonhlweni yasePaschany futhi kunenkulumo yokuthile okufana namahektha ayizinkulungwane ezingama-56 ezweni kanye naseziqhingini ezizi-7.500 XNUMX.
Kwakungahlali ezandleni zaseRussia ngaso sonke isikhathi, yayikwazi ukuba sezandleni zamaShayina isikhashana nangaphambi kwezandla zabanye abantu bendawo. I-Russia yathola lezi zindawo ngo-1858 futhi ngemuva konyaka kwasungulwa iposi lasolwandle. Kusuka lapho indawo yokuhlala yaqala ukukhula futhi yakhula kwaze kwaba ngo-1891 ukwakhiwa kwe- ITrans-siberian Kwaqala futhi izindawo ezikude eRussia njengaleli dolobha zaqala ukuxhuma emhlabeni.
Isitimela bekuhloswe ngaso ukuthi sixhume leli chweba elibalulekile neYurophu yonke, lixhumanise inhlokodolobha yaseRussia namanye amadolobha asendleleni. Lesi siteshi esihle sakhiwa ngo-1912 futhi ngenhlanhla kusukela ngo-1991 abantu bakwamanye amazwe bangasivakashela. INational Gregraphic ikusho lokho ingenye yamadolobha ayishumi asogwini abaluleke kakhulu ngoba inamabhuloho abukekayo, izindawo ezinhle kakhulu, iziqhingi ezinamabhishi amahle ...
Kulokho kufanele sengeze impilo yasebusuku enayo, inhlanganisela yayo ye-gastronomy yokudla kwaseRussia, e-Asia naseYurophu, iminyuziyamu yayo ...
Umlando uyahambisana naleli dolobha, ngakho-ke uma uwuthanda kakhulu umlando wekhulu lama-XNUMX, ungavakashela i- UMnyuziyamu Wezempi Nomlando wePacific Fleet. Igxila kwiWWII futhi iyathakazelisa kakhulu. Omunye umnyuziyamu yi Umnyuziyamu waseS-56 Wasemanzini, isikhumbuzo sabaseRussia abawa kuzo zonke izimpi.
Ungavakashela futhi ISukhanovs House Museum lokho kukhombisa ukuthi leli dolobha elidala lalinjani, nefenisha yalo, imihlobiso yalo, iwindi lakudala. Futhi-ke kuneminyuziyamu embalwa yobuciko. Enye into ethokozisayo yi I-Primorsky Aquarium, eRussky Island. Lesi sakhiwo sinesimo samagagasi esimangazayo futhi savulwa ngo-2016 ngesimodeli se-Mir-1 nezinsalela zezinkalankala ezaziphila eminyakeni eyizigidi ezingama-450 edlule.
Ukuhamba okungekho muntu ongakuphutha ukukhuphukela ku Isidleke Sokhozi, kusuka lapho unokunye Ukubukwa okuhle kwamatheku nedolobha. Ukhuphukela e-funicular, ukuphela kwayo eMpumalanga Ekude yeRussia, emthambekeni weSopka Orlínaya. Yakhiwa ngo-1959 ngaphansi kokubusa kukaNikita Khrushchev, amakalishi ayo amabili kuphela akhiwa eLeningrad futhi yaqala ukusebenza ngo-1962. I-funicular ikukhuphula intaba, intaba-mlilo engasekho eyingxenye yochungechunge lweSikhote Alin. Imibono ihamba phambili.
Lapho usulibonile idolobha lisuka ekuphakameni okuhle, ungalihlola ngezinyawo. Indlela enhle ukuhlola imigwaqo yayo uqala nge Umgwaqo uSvetlanska, umgwaqo wokuqala wedolobha. Izakhiwo zalo ezinhle ziyingxenye yomlando wedolobha, izinkumbulo zekhulu lama-XNUMX lokuqala, namuhla eliguqulwe laba amahhotela nezindlu zezivakashi. Kukhona futhi i- IGolden Bridge neGolden Horn Bay, zombili izinto ezikhangayo ezithandwa kakhulu.
Leli bhuloho lingelinye lamabhuloho amakhebuli amade kunawo wonke emhlabeni. Kwaqedwa ngo-2012 futhi kweqa iGolden Horn Bay, enkabeni yeVladivostok, kuxhuma idolobha nezindawo ezikude kakhulu nomgwaqo omkhulu wesifundazwe. IGolden Bridge iqala ebhange elingakwesokudla leli chweba.Akusilo ibhuloho kuphela, sezizonke zintathu: owesibili unqamula iMpumalanga Bosphorus uye eRussky Island kanti owesithathu uwela i-Amur Bay.
Wonke amabhuloho eVladivostok akhiwa eminyakeni emithathu, Ngobunzima nokuncane, ngoba okuningi akukaze kwakhiwe ngesikhathi esifushane kangaka. Futhi alikho ibhuloho elalakhiwe phezu komugqa wolwandle eRussia, noma ibhuloho elalisekelwa izintambo ukumboza ibanga elingaka. Ngakho-ke, kwafunwa izeluleko zamaShayina, amaFulentshi namaJapane anolwazi oluningi. Ekugcineni, amabhuloho aklanywa eSt.Petersburg futhi bakubona ukukhanya.
Namuhla lawa mabhuloho amathathu ayimpumelelo yobunjiniyela futhi noma ngubani oya eVladivostok uyawawela. Okuhlangenwe nakho kokuwela iRussky Bridge ebusika, nemimoya yayo enamandla, kuyahlaba umxhwele… uma ungaphumi nemoto nakho konke! Ngaphandle kwemoto ungawela iZ Bridgeoy Bridge ngezinyawo, ngosuku oluzolile.
Ngakolunye uhlangothi i- Indlu yesibani yaseTokarevskaya Koshka, indawo ohambela kuyo abaningi. Ineminyaka engu-150 ikhombisa ukungena kwemikhumbi ethekwini. Kukhona njalo izivakashi ezithwebula izithombe. Kufanele futhi uvakashele Inqaba yaseVladivostok, isakhiwo esiyinqaba namuhla siphenduke isigcinamagugu. Noma amasonto obuKristu amaProthestani, amaKhatholika kanye nama-Orthodox aseRussia akhe ngaphezu kwesikhathi.
Lawa maqembu ezenkolo akuwona wodwa kuleli dolobha anokutholakala ngokomlando, kukhona abase-Ukraine, abaseMoldova, abasePoland, abaseFinland ... kepha ukwakhiwa kwamathempeli kuhlala kudinga imali futhi lawa maqembu amakhulu amathathu yiwo abe nezinzuzo. Abanye Amasonto aseVladivostok babhujiswa futhi abanye bakwazi ukusinda esikhathini sobusoshiyali, kwesinye isikhathi bengasasebenzi njengamathempeli. Kukhona esewonke Amasonto angama-40 e-orthodox, kodwa okukhulu kunakho konke nokubabazeka okukhulu yiSonto Lempambano Yomama KaNkulunkulu, okubuyiselwa kwalo okwenzeka ngemva kokuwa kweSoviet Union.
Insimbi yaso inezinsimbi eziyi-10 kanti enesisindo esikhulu isisindo samakhilo ayi-1300. Leli thempeli linamandla abantu abayinkulungwane futhi lizama ukufana kakhulu nohlobo lwayo lwangempela, elinemizi emihlanu. Ngesiphambano, sinokuphakama kwamamitha angama-40. Elinye isonto okufanele laziwe yi ISonto LamaKatolika loMama Ongcwele KaNkulunkulu, zomphakathi wasePoland kanye ne Isonto LaseLuthela iSt.
Akunandaba noma ngabe ungavakashela idolobha ngezinyawo singasebenzisa futhi i- inethiwekhi yezokuthutha okubandakanya amabhasi amatroli, tramu namabhasi. Imetro ineziteshi eziyisikhombisa kuphela. Futhi uma ufuna ukwazi iziqhingi ezizungezile zikhona izikebhe nezikebhe. Ngakho-ke ungaya eRussky Island, isiqhingi saseRussia, esingamamitha ayisikwele ayinkulungwane, elungele ukuhamba ngezinyawo namapikiniki.
Ungaya eVladivostok usuka eJapan noma ungabuyela kuVladivostok waseMoscow. Uma uhamba ngesikebhe futhi uhlala ngaphansi kwamahora angama-72, awudingi visa. Uma uthatha isinqumo ngesitimela, unga thatha iTrans-Siberian eMoscow ngo-13: 20 bese ufika eVladivostok ngo-4: 25 ngenkonzo esheshayo. Uhlobo olushibhile lufika cishe ngo-19: XNUMX kusihlwa ngosuku olulandelayo olushiya inhlokodolobha yaseRussia. Isitimela siyama e-Ilan Ude, e-Irkutsk, eKrasnoyarsk, eNovosibirsk, e-Omsk, eYekaterinburg naseNizhny Novgorod.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Rusia » Uhambo lwaseVladivostok
Amahhotela angu-6 ahamba phambili eCopenhagen
UFuciño do Porco eGalicia